Windows 10 wuxuu fikrad inaga siinayaa waxa uu noqon karo mashruuca Neon | Abuurista khadka tooska ah
Fikradaha waxay qaabeeyaan jirka oo dhan is-dhexgalka ee nooca barxad cayiman ay tahay inay na siiso waana taas waxay kuxirantahay madal kasta, waxaan awoodi doonaa inaan ilaalino astaamaha qaarkood oo ka dhigi doona mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee gaarka ah suuqa dhexdiisa.
Dareenkan, madal kasta waxay lahaan doontaa koox adeegsadayaal daacad ah (iyo kuwa kale oo aan sidaa aaminin) taasi, waxay kuxirantahay howlaha ay barnaamijyadan soo bandhigaan, waxay sii wadi doontaa inay kormeerto barnaamijyadan iyo noocyadooda cusub. Dhammaantood waxay ku yimaadaan qaab, qaab loo qaabeeyo isdhexgalka, bandhigyadeeda, animations-keeda, jirkeeda iyo guud ahaan shaqadeeda.
Baro mashruuca Neón
Mashaariic aad u tiro badan, Windows Waxay abuurtay noocyo badan oo ah, sida ku xusan dalabaadka soo kordhay muddo kadib, ayaa sheegay in shirkaddu go'aansato waxa noqon doona isbeddelada aan ka heli karno wejigeeda cusub. Tan waxaan sidoo kale ku dari karnaa horumarka ku dhex jira habka Software-ka waxaan ka heli karnaa horumarin dhinacyada sida soo bandhigida iyo muuqaalka sawirada, animations, maaraynta macluumaadka, iwm, maadaama mid kasta oo ka mid ah astaamahani si isdaba joog ah isu beddelayo, taasoo keenaysa fikrado cusub.
Wixii Windows, waxa loogu yeero Mashruuca Neon waxay u taagan tahay mid ka mid ah fikradaha naqshadeynta oo leh filashooyinka ugu sarreeya ee dhinaca isticmaalayaasha barmaamijkan. Tani waa sababta oo ah Windows wuxuu horseeday hubaal la'aan badan oo ku saabsan fikraddan cusub ee naqshadeynta, oo si sii kordheysa ugu lug yeelanaya isticmaaleyaasheeda xanaaqa.
Dhinaca adeegsadayaasha, qaar badan ayaa soo maray faallooyin ku saabsan fikradan cusub, tan iyo markii la filayo inay soo bandhigto waji ka buuxa hal-abuurnimo iyo qaabab wanaagsan oo macno walba leh, arrin dad badan ka tirsan, waa deyn ay Microsoft la yeelan lahayd dhammaan bulshada adeegsada.
Dhanka kale, waxaa jiray isku dayo badan oo ay sameeyeen nashqadeeyayaashu taas oo keentay in lagu jees jeeso waxa ay tixgelinayaan inuu noqon karo isdhexgalka fikradda naqshadeynta Windows 10.
Mid ka mid ah nashqadeeyayaashaas waa Jarmal Nadir alsam, kaas oo u qaabeeyey fasiraad u gaar ah waxa ay u aragto inuu yahay waxa loogu yeero Mashruuca Neon.
Dhaleeceynta dhexdeeda, waxaa lagu sheegay in tusaalaha noocan oo kale ah uu u muuqdo mid aad u wanaagsan, loo maleeyo kororka filashooyinka isticmaalaha ee ku saabsan Project Neon. Waana in Alsam uu abuuray fikrado naqshad badan oo kala guurka ah ee u dhexeeya gobollada kala duwan ee nidaamka hawlgalka lagu qadarin karo. Intaa waxaa dheer, waxay muujineysaa sida menu-ka bilowga iyo is-dhexgalka ay u maareeyaan la qabsiga aaladaha sida kaniiniga, aaladda gacanta ama desktop-ka caadiga ah.
Hufnaanta menu-ka iyo astaamaha ayaa sidoo kale lagu sameeyay isbadaladooda ugu waaweyn ee ku jira noocyadan, oo ay ku jiraan saameynta muraayadda ayaa soo noqotay inkasta oo xoogaa isbeddello ah lagu sameeyay. Intaa waxaa sii dheer, baarka xiriirku wuxuu wax badan ka ciyaari karaa habka bulshada, taas oo ugu dambeyntiina hesho mudnaan weyn fasalka bandhigyada.
Noocyada mashaariicdani waxay keeneen rajo badan oo laga qabo waxa noqon kara nidaamka Windows 10, oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay si aad ah u soosaaraan waxa noocan ah naqshadaynta fikradeed ay noqon karto.
In badan oo laga filayo, Aslam wuxuu ku guuleystey inuu nolosha siiyo waxa lagu qiyaasey inay yihiin fikradda cusub ee barnaamijkan oo dhan waana iyada oo la abuurayo tusaalahan, dadka isticmaala waxay ku guuleysteen inay sharad badan ka galaan waxa naqshaddan cusubi noqon doonto, sababtaas awgeed , sugitaanku iyo filashadu wey korodhaa waqti ka dib. Waana taas, iyada oo aan loo eegin fikradaha, waxay umuuqataa in Windows ay waajib ku tahay, inay waajib ku ahaato, inay adeegsadayaasheeda u soo bandhigto sida ugu fiican dhammaan shaqooyinkooda guud ahaan qaabdhismeedka fikradaha naqshadeynta, taas oo, waqti ka dib, ay abuureen. rajada laga qabo waxa ay noqon karto marxaladan cusub ee madal caan ah oo lagu abuuray maskaxda maskaxda ee Microsoft.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Naqshaddan fikradeed ee Windows 10 waxay na siineysaa fikrad ah waxa mashruuca Neon noqon karo